नेपाल देखि अष्ट्रेलियासम्मको जीवन भोगाइले सिकाएका तिता सत्यहरु - Himalayan Kangaroo
नेपाल देखि अष्ट्रेलियासम्मको जीवन भोगाइले सिकाएका तिता सत्यहरु
Posted by Himalayan Kangaroo | २१ चैत्र २०७४, बुधबार १०:४८ |
नेपाल देखि अष्ट्रेलियासम्म हामीले पढाइको एक तह पूरा गरेर आउँछौं । अष्ट्रेलियामा राम्रो शिक्षा हाम्रो लागि आकर्षण हो। अष्ट्रेलियामा राम्रो शिक्षाको लागि आएका भाइबहिनीहरुसंग मलाई मेरो भोगाइले दिएको शिक्षा, तिता सत्यहरु बाँड्न मन लागेको छ ।
हरेक मानवले आफ्नो जीवन आफ्नो तरिकाले जिउने अधिकार बोकेको हुन्छ। करकाप र अरुले के भन्ला र अरुले के सोच्ला भनेर जीवन जिउनेहरु खुशी र सुखि हुन धेरै गाह्रो हुन्छ । कसैलाइ केही दिनु छ र गर्नु छ भने आवश्यकता पहिले बुझ्नु पर्छ, फोकटमा समय र बल खर्चिनु राम्रो होइन।
सबैलाइ खुशी पार्नु भन्दा सत्य अङ्गाल्न सक्नुपर्छ । सहिलाइ सहि अनि गलत भने त सत्यले कहिलेपनि नछाड्ने पक्का पो नत्र चेपारे भै जीवन बाँच्नु बहादुरि हो र ?
हरेक नैतिक शिक्षा पढ्नेहरूको मानसिकतामा सत्य र सहि कुराको समर्थन गर्ने लक्षण हुनु जरुरी हुन्छ । एउटालाई राम्रो गर्दैमा मान्छे राम्रो हुँदैन , मान्छेले समग्र राम्रा मान्छेहरुलाइ राम्रो गर्नु अनि राम्रो सोच्न सक्नु पर्छ। हामी अरुले भनेको र बोलेको कुरा सुनेर जिवनका निर्णयहरु लिन तयार हुन्छौं तर याद राख्नु पर्ने कुरा भनेको आफूले स्वम् आफ्नो दक्षता अनि आफ्नो तागत बुझी आफू हिड्ने बाटो आफैं बनाउनु पर्छ।
यहाँ अरुलाइ खुशी पार्ने अनि समाजलाई रिझाउने चक्करमा धेरै मुहारहरु मलिन देख्छु , धेरै सपनाहरू फुटेको देख्छु । समयसङ्ग चल्नु अनि सत्य अङ्गाल्नु राम्रो हो । सहि कुराको समर्थन राम्रो हो । कसैलाई गलत प्रयोग नगर्नु राम्रो हो । कमजोरलाई नहेप्नु वा कमजोरको हात थाम्नु राम्रो हो । कसैलाई राम्रो कुरामा हौसला दिनु राम्रो हो , प्रोत्साहन दिनु राम्रो हो ।समयको माग सङ्गै आफुलाइ सकारात्मक परिवर्तन गर्नु राम्रो हो, अरुको राम्रो तत्वलाइ अङ्गाल्नु राम्रो हो ।
मानव भएर जन्मेपछि अरुले भनेको सुन्नु र बुझ्नु आवश्यक छ । सहि भयो भने अङ्गाल्नु अनि गलत भयो भने लत्याउनु। याद राखौं सबै कुरा हेर्दैमा राम्रो वा नराम्रो देखिदैन , अवलोकन जरुरी हुन्छ। कमाउनु अनि रमाउनु हरेक मानवको अधिकार हो भने आफू रमाउन वा आफूले कमाउन गलत उपयोग वा कसैको दुरुपयोग गर्नु गलत हो । यहि कुरा हाम्रो देश नेपालमा सामान्य होला तर हामी अष्ट्रेलियामा छौं र अष्ट्रेलियाको कानुनले यस्लाइ जघन्य अपराधको रुपमा राखेको छ। त्यसैले जस्तो देश त्यस्तै भेष, सधैं नेपालमा रहंदाको जस्तो सोच राख्यो भने कुवाको भ्यागुतो कुवामै नरहला भन्न सकिन्न।
जिवनमा एकचोटि सिक्ने , बुझ्ने, अगि जान्ने अवसर हरेक मान्छेले पाँउछ। सबैभन्दा जरुरि आफूले आफूलाई चिन्न सक्नुपर्यो , अरुको भन्दा आफ्नै भरोसा गर्नुपर्यो । सबै ज्ञान् सिक्नु र बुझ्नु , सफलताको पहिलो खुड्किला हुन सक्छ । हासिल गर्ने धेरै चिज छन् यहाँ , तैपनि हामी स्तब्ध हुनु समय बर्बाद गर्नु हो। जिवनलाइ योजनाबद्द बनाऔं अनि भोलीको दिनमा आउन सक्ने पछुतो भन्ने शब्दलाई आफूबाट पर राखौं ।
मेरा भाइबहिनीहरुले यी लेखिएका कुराहरुबाट राम्रो कुरा केही लिएर जीवन सुन्दर बनाउनुहुनेछ र मेरा अग्रजहरुले मलाई मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षामा छु।
Previousजब हलिवुड अभिनेता विल स्मिथसंग डेटमा गइन् रोबर्ट सोफिया
Nextविदेशी लगानीकर्तालाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न मन्त्री पुनको आग्रह
अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्नुमा कम्युनिष्टहरु जिम्मेवार
२७ चैत्र २०७४, मंगलवार ०१:०२
अष्ट्रेलियामा तलबमा किन ठगिन्छन् विद्यार्थीहरु ? यस्ता छन् कारण र कानुनी सहयोगको उपाय
११ कार्तिक २०७५, आईतवार ०६:०२